Ukusebenza okuphezulu kokumiswa okupheleleyo kombane kunye nomthengisi | IIMI
IBHAYIBHILE YENTABA YOMBANE
IBHAYIBHILE YEMPAHLA YOMBANE
FAT TIRE zombane ibhayisekile
Ukusebenza okuphezulu kokumiswa okupheleleyo kwebhayisekile yentaba
I-FALCON yenye yezona zinto zinamandla, ukumiswa okupheleleyo kokusebenza kwe-e-bhayisekile epakishwe ngentla kwemigaqo yomgca. Iza kunye nokuphuculwa kweeteksi Hydraulic brakes zokumisa ngokukhawuleza nangokugudileyo. Xa idityaniswe ne-torque yethu ye-90N.m le bhayisekile inamandla okukhawulezisa kunye namandla e-braking eya kudlula kulindelo. Sihlaziye iFALCON ngentla yomgca wedreyini ukusuka eShimano Deore. I-e-bhayisekile inikezela ngemoto engama-36V 250W ekusa kwindawo engaphaya apho ufuna ukuya khona. Umdibaniso oyingqayizivele wokumiswa okupheleleyo kunye namavili abanzi anikezela ukukhwela ebomini bakho endleleni okanye kwindalo. Songeze iiyure ezongezelelweyo kubugcisa ekwakheni isakhelo sikumgangatho ophezulu akukho nto xa kuthelekiswa nabanye abavelisi.
Injini yeBafang yeZiko elinamandla
I-FALCON ikunye ne-BAFANG yeZiko leMoto ibonelela ngenkxaso enamandla kakhulu kwiimeko ezahlukeneyo. Itekhnoloji ye-250W iziko leMoto linamandla ngokwaneleyo kwaye lithembekile. Ngokudityaniswa ne-torque sensor kunye ne-sensor yesantya, i-crank ingene ngaphakathi kwimoto. Yomelele ngokwenene kwaye ineintanance.
Ukurhoxiswa komgangatho ophezulu we-CNC
Ukumiswa phakathi kwenziwa ngumatshini we-CNC olawulwa ngokungqongqo ngokuchaneka. Yindibaniselwano eyomeleleyo kunye nomgangatho ophezulu wokumiswa phakathi kwe-EXA. Yonke intshukumo ihamba ngokukhululekileyo nangokutyibilikayo, onke amandla anokuhamba aye kwibhayisikile kakhulu.
Inamandla 36v Lithium-ion Polymer Ibhetri Nge Tshixa
I-FALCON ixhotywe nge-13Ah / 36V (468Wh) ye-Li-ion Polymer ibhetri enamandla kwaye yomelele. Ipakethi yebhetri ilungile ngokwenene, ine-BMS efanelekileyo kunye nokukhuselwa okugqithisileyo. Awuyi kuba naxhala xa iphantsi kokutshaja okanye kusetyenziswa. Sikhathalele ukhuseleko lweemveliso zethu.
I-36V 13Ah ibhetri yeselfowuni ilinganiswe ngexabiso le-500.
I-42V, 2 Amp itshaja efanelekileyo, isebenza kwiivenkile zamandla ze-100V-240V AC
Umlawuli oSebenzayo 36V 15Ah (Uqhubeko lwangoku oluphezulu) i-18 transistor
Umboniso we-backlit we-LED ngenkqubo yokuchonga ngokulula kunye ne-USB yokutshaja izibuko.
I-250 Watt Igama
Ngaphambili: Isibane esikhanyayo se-LED
Ngasemva: Ukukhanya okuqaqambileyo ngasemva kunye nemowudi yokukhanya yokuqhekeza.
Inqanaba lesi-5 lePedal lincedisa ngoomazibuthe abali-12
Izihlanganisi ezinganyangekiyo ngamanzi kunye neentambo zokubopha
I-Tektro Aries, i-180mm Disc Brake Rotor
I-Disc yeTektro ene-180 Rotors, Iminwe emithathu yeminwe enezithintelo zeMoto kunye nokuFikelela okuLungelelanisiweyo
Prowheel, zakha ingxubevange, 170mm Ubude, 48 Ukubola Steel Chainring kunye Plastic Guide
UShimano Deore 9 iDerailleur
RST uxinzelelo oluphezulu lokutshixa ifolokhwe, eguqukayo
Shimano deore 9 isantya
Isikhumba sefeksi esomeleleyo
I-Handlebar edibeneyo yeAluminiyam Alloy, 670mm Ubude
I-Neko, Iindebe zangaphakathi, Ethe ngqo 1-1 / 8 "
Ukususela umlenze sentsimbi, entwasahlobo zilayishwe, ukuphakama adjustable
Iplanethi ye-Wellgo B087DU yeAluminiyam
Iindonga eziphindwe kabini, iAluminiyam ingxubevange, i-36 Hole
Thengisa iRoyal Gel Saddle
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo, Ngasemva eyi-12, Isilivere eneengono
I-CST 27.5x1.95-Ukubetha okungafunekiyo
Egqithileyo Isithuthuthu sokubaleka esincinci esincinci esincinci esincinci esiphakathi
Okulandelayo: I-48V 500W Super eyomeleleyo ngexabiso eliphantsi ibhayisekile yentaba
700c Bike yeSixeko soMbane
IsiXeko soMnqamlezo iBike
Ibhayisekile yeSixeko sombane
Imijikelezo yeSixeko soMbane
I-Europe Electric City Bike
IStrom yesiXeko seBhayisekile
I-JIANGSU IMI ZOMBANE WEZITHUTHI ZOBUGCISA TE., LTD